Technics Czech Airlines na-agbasawanye ọrụ ọrụ ụgbọ elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Technics Czech Airlines na-agbasawanye ọrụ ọrụ ụgbọ elu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Technology • Tourism • Transportation • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Idtụle ọnọdụ dị ugbu a n'ofe ụlọ ọrụ ụgbọelu, Igwe ụgbọ elu Czech (CSAT) ekpebiela isonyere ndị agha na FlyTech Aviation Services ma gbasaa ọtụtụ ndozi ụgbọelu na ọrụ ọdụ ụgbọelu n'ọtụtụ ọdụ ụgbọelu mba dị na Czech Republic na Slovakia. Ebumnuche azụmaahịa ọhụrụ ahụ na-elekwasị anya n'ahịa na-atọ ụtọ nke ukwuu, nke ndị ụgbọ elu, ndị nwere nsogbu ụgbọelu na ndị nrụpụta na-achọsi ike ugbu a. Otu ngwungwu na - ejikọ nhọrọ ntinye ụgbọ elu na ndokwa nke ndozi dị elu na - anọchite anya asọmpi bara uru. N'ihi mmekorita na ahụmịhe siri ike, ụlọ ọrụ abụọ ahụ nwere ike ịbịakwute ndị ahịa nwere ike.
“N’ịmara oke mkpa a na-achọ n’ahịa, anyị ekpebiela ịbawanye ọrụ anyị ma, na-arụ ọrụ na FlyTec Aviation Services, na-enye ụgbọ elu, ndị na-emebi ụgbọelu na ndị nrụpụta ihe mgbagwoju anya jikọtara ya na ọdụ ụgbọ elu n’ọtụtụ ọdụ ụgbọelu na Czech Republic na Slovakia. Site na mmekọrịta na ahụmịhe, anyị nwekwara ike inye ndị ahịa anyị nkwado teknụzụ, ọrụ ndozi, enyemaka n'oge ọrụ agba ụgbọ elu na ọrụ nke ngalaba ndị ọzọ ọkachamara anyị, Pavel Hales, Onye isi oche nke ndị isi ụgbọ mmiri Czech Airlines Technics kwuru.
Companieslọ ọrụ abụọ a nwere ike ichebe ndị ahịa ya obere oge na ọdụ ogologo oge yana ọrụ ndozi ụgbọ elu ndị ọzọ na ọdụ ụgbọ elu mba Czech ma ọ bụ Slovak, nke, maka ọnọdụ ha, na-anọchite anya nhọrọ dị mma maka ndị Europe na ndị na-abụghị ndị Europe. N'akụkụ Václav Havel Airport Prague, ebe isi ụlọ na hangars nke Czech Airlines Technics, Košice International Airport, Leos Janacek Ostrava Airport, Ọdụ ụgbọ elu Karlovy Vary na Brno Airport gụnyere. Na ihe omume a na-edebanye ebe niile a na-adọba ụgbọala na ọdụ ụgbọ elu ndị edepụtara n'elu, CSAT ga-ekwupụta ndọtị ọrụ a na ọdụ ụgbọelu ndị ọzọ. A ga-enyefe ebe a na-adọba ụgbọala maka ụdị ụgbọ elu dị iche iche, yabụ ma warara ma mbara. Agbanyeghị, otu akụkụ ụgbọ elu ahụ na atụmatụ nke ebe ndị na-adọba ụgbọala dị na otu n'ime ọdụ ụgbọ elu n'oge ụfọdụ ga-abụ mkpebi dị mkpa.
“Ndị ọrụ anyị na ndị injinia ruru eru ga-arụ ọrụ n’akụkụ ụlọ ha dị na Prague na ọdụ ụgbọelu ndị ọzọ, ebe ha nwere ike ịrụ ọrụ ndozi ụgbọelu gbara akwụkwọ. A ga-arụzi ndozi nyocha niile nke Boeing 737 dị warara, Airbus A320 Family na ụgbọ elu ATR 42/72 kpọmkwem na hangar anyị dị na Václav Havel Airport Prague, ebe ụlọ ọrụ ọrụ CSAT ndị ọzọ dịkwa maka ndị ahịa, ”ka Pavel Hales kwukwara.
A na-enyocha ndenye ego mgbe niile, gụnyere ọdịda, ngbanwe, ihe ndozi akụkụ, mmezi agba nke ihe ndị ọzọ na ọrụ ndị ọzọ metụtara ya n'oge a na-adọba ụgbọala. Otu ndị ọkachamara nọ na Prague na-enye ndị ọrụ ụgbọelu na ndị ọrụ nkwado teknụzụ CAMO zuru oke n'ime ngalaba nke Nlekọta Nlekọta, Ntugharị Ntugharị na Ntọala ụgbọelu na Ndozigharị Akụ.